भारतको दादागिरी र थिचोमिचो कहिलेसम्म? | नेपाली पब्लिक भारतको दादागिरी र थिचोमिचो कहिलेसम्म? | नेपाली पब्लिक
नेपाली पब्लिक २०७६, २८ असार शनिबार १४:०२
बर्खा लागेपछि नेपाल त्राहिमाम् हुन्छ। हरेक वर्ष पहाडमा बाढीपहिरो र तराईमा डुबानले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ। ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ। प्राकृतिक रूपले नेपालले झेल्नुपरेको मुस्किल त छँदैछ, भारतका कारण नेपालको तराई भूभागमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताले अप्राकृतिक विपत्ति हरेक वर्ष झेल्दै आउनु परेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत भारतले यसअघि नै नेपाल-भारत सिमानाको दशगजा मिचेर दर्जनौँ बाँध निर्माण गरी नेपालको पानीको निकास नै बन्द गरिदिएकाले हरेक वर्ष तराईका भू-भाग डुबानमा पर्ने गरेका छन्।
सन् १९८५ मा राप्ती नदीमा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र सन् २००० मा दशगजा मिचेर निर्माण गरेको कलकलवा तटबन्धपछि भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपालको सिमानामा सडक बनाउने नाममा दुईदेखि चार मिटरसम्म अग्लो चारलेनको सडक बाँध निर्माण गरिरहेको छ। भारतीय सूत्रका अनुसार यो सडक बाँधको निर्माण कार्य अहिलेसम्म झन्डै ६० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। यो सडक बाँधको निमार्ण कार्य सम्पन्न भएपछि बर्खामा नेपालको तराई भूभाग सम्पूर्ण रूपले डुबानमा पर्ने निश्चित छ।
यसअघि बनेका पूर्णागिरि बाँध, टनकपुर बाँध, शारदा ब्यारेज, कैलाशपुर बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध, कोइलाबास बाँध, महली सागर बाँध, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध, डाँडा फेना बाँध, गण्डक ब्यारेज, लालबकैया बाँध, कमला बाँध, सिरहा बाँध, खाँडो बाँध, कोशी ब्यारेज, लुना नदी बाँध आदिले नै नेपाललाई हैरान बनाएको थियो। यी बाँधका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा परी अर्बौंको क्षति पुग्दासमेत भारत रमाइलो मानेर बसिरहेको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका हौँ।
त्यसो त भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको दोहन अंग्रेजको पालादेखि नै गर्दै आएको छ। अंग्रेजले भारतमा रेलवेको विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने काठ नेपालको पर्सा र मकवानपुरबाट ओसारेको थियो। नेपालबाट सखुवाका काठ र ढुङ्गा गिट्टी भारतमा लैजानका निम्ति अंग्रेजले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म रेलमार्ग विस्तार गरेको थियो। त्यसैगरी कोशी ब्यारेज निर्माण गर्ने नाममा भारतले धरानसम्म रेलमार्ग बनाएर नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र काठ पश्चिम बंगालसम्म पुर्‍याएको थियो।
अहिले भारतले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सिमानामा चारलेन सडक निर्माणको नाममा बनाइरहेको बाँधमा नाम मात्रका स-साना पानी निकासका कल्भर्ट राखेको छ। बर्खामा यी कल्भर्टबाट पानीका निकास सम्भव छैन। अन्तर्राष्ट्रिय नियम-कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्दै भारतले निरन्तर थिचोमिचो गरिरहेको छ। पाएसम्म र सकेसम्म भारतलाई नेपालका सबै नदीको पानी चाहिएको छ।
नेपालका मुख्य नदीका पानी त उसले लिइ नै सकेको छ। अझ भारतको स्वार्थ कोशी नदीमा उच्च बाँध निर्माण गर्ने रहेको छ। भारतले ‘भाइभाइ’ भन्दै नेपाललाई पेल्ने, हरेक वर्ष सिमाना मिच्ने, दशगजामा एकतर्फी बाँध निर्माण गर्ने अनि नेपालीलाई ठिक्क पार्न ‘नेपालके साथ हमारा रोटी और बेटीका सम्बन्ध है, सांस्कृतिक सम्बन्ध है, धार्मिक सम्बन्ध है, भाषा और वेशभूषाका सम्बन्ध है’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत भ्रममा राख्ने गरेको छ।
नेपाली शासकहरू भारतीय शासक र कर्मचारीका अगाडि ‘भिजेका मुसा’जस्ता बन्छन्। भारतकै इशारामा नेपालमा शासन चलाउँछन्। भारतको आदेशअनुसार राज्य सञ्चालनको निर्णय गर्दछन्। अनि आफूलाई हाम्रा नेताहरू नेपाली जनताका बीच महान् राष्ट्रवादी भएको देखाउँछन्। नेपाली मिडियाका स्वनामधन्य ‘नामचीन’ पत्रकारहरू भारतीय दूतावासको रक्सीमा डुबेर मस्त छन्, उनीहरू आफ्नो स्वाधीनता र कर्तव्यलाई रक्सीसँग साट्नमा गौरवान्वित देखिन्छन्।
त्यसैगरी हाम्रा मधेशवादी नेता भनाउँदाहरू भारतकै आड लिएर नेपाललाई धम्क्याउँछन्, तर्साउँछन् र बार्गेनिङ गरेर नेपालको सत्तामा पुग्न चाहन्छन्। तर, यसरी भारतको नेपालमाथि थिचोमिचो र दादागिरीप्रति उनीहरू ‘चुँ’सम्म बोल्दैनन्। वर्षौंदेखि भारतले निर्माण गरेको सीमाका तटबन्धका कारण तराईका भू-भाग डुबानमा पर्दै आएका छन्। तर, तराईका ‘मसिहा’ भन्नेहरूले प्रभावकारी रूपमा एक शब्द पनि बोलेको सुनिँदैन। के हामी नेपाली भारतका दास हौँ? ‘नामर्दको स्वास्नी हुुनुभन्दा मर्दको कमारी हुनु बेश’ भन्ने नेपालीमा एउटा प्रचलित उखान छ। के अब हामी नेपालीले यही उखानलाई आफ्नो नियति सम्झनुपर्ने हो? होइन भने भारतीय दादागिरी बन्द गर। सिमानाको बाँध हटाऊ। यसका लागि नेपाली शासकले दरोसँग कदम उठाऊ।
सँधै विपद, अनि उद्धार र…
पर्साका दर्जनौँ गाउँ र सडक…
भैँसीले बचाएको १४ जनाको परिवार
प्रतिवेदन थन्क्याउँदाको परिणाम, बाढी र…
भारतको बदमासीले गण्डक नहरमा २…